I-Apple Music ine-15% yemarike yomculo wokusasaza | ndisuka kuMac
I-Apple ichithe iminyaka engaphezu kwe-2 ngaphandle kokubhengeza inani lababhalisi kwiqonga lomculo lokusasaza. Isibalo samva nje esaziyo ngababhalisi bezigidi ezingama-60 ngoJulayi 2019. Ngokwengxelo yamva nje epapashwe yi-MIDiA, isabelo se-Apple Music simi kwi-15%, sisenza iqonga lesibini lomculo wokusasaza, emva kweSpotify.
Ingxelo entsha evela Uphando lweMIDIA ibonisa ukuba imarike yomculo wokusasaza ikhule yaba ngababhalisi abazizigidi ezingama-523,9 kwikota yesibini ka-2021, emele ukwanda kwe-109,5 yezigidi (26,4%) xa kuthelekiswa nekota enye yonyaka ophelileyo.
I-Apple Music ibala malunga ne-15% yelo nani ngelixa Umculo weAmazon kunye noMculo weTencent une-13% nganye. Umculo weYouTube usemva kakhulu, une-8% kuphela yentengiso, nangona ngokophononongo, ikhula ngesantya esincomekayo.
UGoogle wayekhe waba sisiqhwala esithubeni, kodwa ukuphehlelelwa koMculo weYouTube kuguqule ubutyebi bayo, ikhula ngaphezulu kwe-50% kwiinyanga ezili-12 ukuya kwiQ2021 ngo-XNUMX.
I-Spotify, enesabelo sangoku se-31%, yabona isabelo sayo semarike yehle kancinci kwikota yesibini ka-2021, ukusuka kwi-33% kwikota yesibini ye-202o. Nangona kunjalo, uSpotify wongeze ababhalisi abaninzi kwiinyanga ze-12 ngaphambi kweli xesha kunayo nayiphi na enye inkonzo yokusasaza.
Ngokutsho kweMIdia, akukho mngcipheko wokuba uSpotify uya kulahlekelwa isikhundla sakhe sobunkokeli kwimarike, ubuncinane kwixesha elifutshane.
Nangona kunjalo, inkampani inokuxhalaba oko isabelo sayo semarike siwile isithuba sonyaka wesithathu olandelelanayo njengoko iinkonzo ezikhuphisanayo zinyusa umdlalo wazo wokusasaza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Music » I-Apple Music ine-15% yemarike yomculo wokusasaza